Xanta Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta! | Somaliland Mirror
Home WARARKA Xanta Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta!
Liverpool ayaa kula tartami doonta Tottenham, West Ham iyo Everton saxiixa xiddiga Bournemouth ee David Brooks.
Jurgen Klopp ayaa doonaya xiddig khadka dhexe ah oo bedela Adam Lallana oo kooxda ka tagay, waxaana uu aaminsan yahay in Brooks uu booskan ku habboon yahay.
Xiddigan heerka caalami ee reer Wales, oo 23 jir ah, ayaa ka soo laabtay qalliin muddo dheer ah oo uu ku maqnaa, inkasta oo Cherries ay ku guul darreysatay inay sii joogto Premier League.
The Star ayaa soo warinaysa inuu haysto xiddigo fara badan oo ay ku kici karto ugu badnaan 35 milyan oo ginni iyadoo Bournemouth ay isku dayeyso inay lacag kaash ah ku iibsato.
Hal ciyaaryahan ayaa u muuqda inuu u dhaqaaqayo Anfield, sida laga soo xigtay The Echo, waana daafaca bidix ee Giriiga Konstantinos Tsimikas.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis 11.75 milyan ginni la gaadhay kooxda Olympiacos ka dib markii ay iska dhaaftay Jamal Lewis sababo la xidhiidha qiimeynta Norwich ee £ 20m.
Tsimikas, oo 24 jir ah, ayaa la rajaynayaa inuu kala hadlo shuruudahiisa shaqsiga ah Liverpool isla markaana uu dhammaystiro heshiiska tijaabada caafimaadkana maro bilowga usbuuca soo socda.
– Dhanka kale, Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay Alexandre Lacazette ka iibin doonto kooxda Atletico Madrid haddii Pierre-Emerick Aubameyang uu heshiis cusub qalinka ku duugo.
Sida laga soo xigtay The Star, Lacazette ayaa 30 milyan ginni ugu wareegaya caasimada Spain xilli uu kabtan Aubameyang uu heshiis waqti dheer ah inuu saxiixo qarka u saaran yahay.
Lucas Torreira ayaa ah xiddiga kale ee Arsenal ka tirsan kaasoo ka tagi kara Emirates xagaagan si ay kharashka ay ku iibiyaan ugula soo wareegaan xiddiga Atletico ee Thomas Partey.
Jariiradda The Express ayaa sheegeysa in Gunners ay diyaar u tahay inay lacag kaash ah ku iibiso xiddiga reer Uruguay ka dib 2 xilli ciyaareed oo uu ku qaatay Waqooyiga London isla markaana AC Milan ay xiiseyneysa inay iibsato.
Tababare Mikel Arteta ayaa sidoo kale wajahaya dagaal si uu u sii haysto goolhayahiisa 2aad ee Emiliano Martinez, kaasoo wacdaro dhigay xilli ciyaareedkan markii Bernd Leno uu dhaawac soo gaadhay.
Wareysi uu siiyay idaacada Argentine Continental, Martinez ayaa sheegay in sida kaliya ee uu ugu sii negaado kooxda ay tahay hadii loo dammaanad qaado in la ciyaarsiin doono ciyaaro badan.
– Ciyaarsiin la’aan ayaa dhibaato ku noqon karta goolhayaha Manchester United Dean Henderson, iyadoo The Standard ay sheegeyso in mar kale amaah lagu bixin doono iyadoo Ole Gunnar Solskjaer uu gadaal ka riixayo in lambarka 1aad uu sii haysto David De Gea.
Waxay sheeganayaan United inay durbaba wadahadalo kula jiraan Sheffield United kaasoo ku aadan in xilli ciyaareed seddexaad uu joogo Bramall Lane goolhayahan 23 jirka ahi.
– Crystal Palace ayaa 8 milyan ginni ku qiimeysay Christian Benteke iyagoo raadinaya inay lacag urursadaan si ay ugu dhaqaaqaan xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Watford ee Ismaila Sarr.
In kasta oo kooxda Watford dib ugu laabatay heerka 2aad, Sarr ayaa wacdaro ka dhigay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay Premier League laakiin Hornets ayaa doonaysa inay ku iibiso 40 milyan ginni.
Wolves iyo Liverpool ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayay inay u dhaqaaqayaan 22 jirkan reer Senegal laakiin The Mail ayaa aaminsan in Palace ay safka hore kaga jirto.
Previous PostDeg Deg: Xisbiga Waddani Oo Si Adag Oo Dhaliilay Cabudhinta Saxaafada iyo Xadhiga Sharci-darrada Ah Ee Xukuumada Madaxwayne Biixi. Next PostMaalqabeenada adduunka oo balaayiin dollar ka macaashay xanuunka koronaha